Tsy misy rahona ny rahona . Mety toa ny hany fomba ahafahana mijery akaiky ny iray dia ny hamihina ny seza varavarankely amin'ny fiaramanidina; Fa ahoana raha nilaza taminao aho fa misy fomba tsara kokoa ... iray izay tsy midika akory hoe mandao ny tany. Minoa fa na tsia, ny zavatra rehetra tokony hataonao dia ny fitadiavam-bolo.
Tsy ny rahona rehetra akory no mirehareha amin'ny lanitra
Eny, ny zavona - ilay tranga iray izay manarona ny fahitanao amin'ny alin'ny marainan'ny maraina - dia tena rahona.
Misy anefa ny fahasamihafana lehibe eo amin'ny roa amin'izy ireo: ny rahona dia miisa arivo metatra ambonin'ny tany, fa ny zavona kosa dia mitovitovy amin'ny tany na akaikikaiky ny tany.
Ahoana no mahatonga an'ity hetsika tsy mahazatra ity ny orana? Eny, raha toa ny rivotra manamboatra ny rahona hitantsika miakatra eny ambony lanitra dia tsy maintsy manangona an'arivony eo ho eo mialohan'ny hahatongavana any amin'ny ambaratonga ahafahany mamirapiratra sy miforitra, mila mandeha lavitra kely ny rivotra miditra amin'ny rahona matevina satria efa tena akaikin'ny toerana izay tsy ahafahan'izy ireo mihazona ny vovo-drano rehetra misy azy (ity fotoana antsoina hoe saturation na 100% ny haavony). Izany no marina, ny mari-panaon'ny rivotra sy ny tendron'ny tendro (teboka roa izay rehefa mitovy, satana midika) eo amin'ny manodidina izay tsy misy mihoatra ny dipoavatra (manodidina ny 4 ° F (2.5 ° C).
Firafitry ny orana
Tahaka ny rahona, ny zavona dia manomboka rehefa mandoro ny vovo-drano (fiovan'ny toetr'andro) ao anaty ranon-drano kely mipetaka amin'ny rivotra.
Amin'ny ankapobeny dia misy fomba roa mahatonga ny rivotra hiditra anaty rahona matevina ambany: 1) amin'ny alalan'ny fanamainana, na 2) amin'ny fanampiana ny vovo ampy rano mba hitarika sata. Na iza na iza amin'ireo dingana roa ireo dia mandoko endrika amin'ny famaritana ny karazana zavamaniry ho avy. (Azoko antoka fa tsy fantatrao fa nisy karazana samy hafa!)
Ny tara- pahazavana (taratra) dia mipoitra amin'ny alina mazava tsara, rehefa avoaka ny haavon'ny lanitra. Amin'ny alina toy izany, dia maika haingana ny tany sy ny rivotra eo amboniny. Satria avo ny RH, vitsy kely ny fandrefesana dia hampidina ny hafanan'ny rivotra amin'ny tontolon'ny gorodona ary hameno ny orana amin'ny endriny. (Ny ranonorana dia manonona ny anaran'ity dingan'ny hafanana manalavitra ny tany miverina any an-habakabaka.) Koa satria ny rivotra misy ny orana dia mangatsiaka sy mafana, dia mandevona ny havoana , mitarika mankany amin'ny zavona mando .
Ny zavona tampoka dia nohariana rehefa tery ny rivotra mando, toy ny sisin'ny tendrombohitra iray na faritra mihanalavitra. Ny rivotra mihetsiketsika dia mampihena ny rivotra, ary rehefa tonga ny mari-pana amin'ny tendron'ny tandroka, dia misy ranonoram-borona miova.
ny endriky ny rivotra mafana sy mando (na mihetsika mihetsika) amin'ny tany mangatsiaka na rano. Ary toy izany, ny rivotra dia miala ambany. Raha vao mafana ny rano, dia mitambatra ny fotsy. Ny fampangatsiahana ny rivotra dia mahazatra mandritra ny ririnina sy ny taolam-boaloboka ary matetika dia zavona matevina na matevina.
Ny zavona ao anaty rano dia fahita mahazatra eo ambonin'ny dobo, farihy ary renirano matevina rehefa mivezivezy ny rivotra, fa ny rano (izay malamalama kokoa noho ny rivotra) dia mbola hafafana hatrany ny sakafo omaly tolakandro. Rehefa miparitaka manerana ny rano mafana ny rivotra mafin'ny rivotra, dia mihalefy ny sasany amin'ny hafanana ao amin'ny farihy ary miakatra kely avy etsy ambany. Ny vovon-drano mafana dia miposaka ao amin'ny rivotra mangatsiaka etsy ambony, mifangaro miaraka aminy, mangatsiatsiaka, ary mifangaro anaty tondra-drano kely. Matetika ny zavona dia mamorona volo eo ambonin'ny rano eo amin'ny rano - na dia lavitra ny rivotra mitsingevana dia tsy maintsy mandeha ho azy amin'ny toeran'ny kondensation. Amin'ny farany ny vatan'ny rano dia mangatsiaka loatra ka tsy mipetaka intsony ny hafanana ao anaty rivotra mafana eo amboniny, ary amin'izany dia mitatra ny famolavolana zavona.
Ny zavona avy any ivelany (alaina) dia vokatry ny orana sy ny oram-panala nianjera tao anaty rivotra mangatsiaka teo ambanin'ny rahona matevina. Satria ny rotsak'ireo rano na ranomandry ranomandry dia mianjera ao anaty rivotra matevina etsy ambany, dia mivoaka ao anaty vovo-drano izy ireo. (Antsoina hoe "virga" izany tranga izany.) Ny vovo-drano dia mampitombo ny vontoatin'ny rivotra ety ambany ary manala azy koa. Raha vao tafavoaka ny rivotra dia nipoitra teny amin'ny rivotra mba hametrahana azy, ny rindrin'ny zavona dia avy amin'ny tany mamakivaky ny rahona.
Amin'ny ririnina, dia mety haheno karazana zavona roa hafa ianao, mangatsiatsiaka sy zavona migaingaina . Ny oram-baratra mangatsiaka dia miasa amin'ny toerana iray mitovy amin'ny orana mangatsiaka; Ny ranon-tantely ny ranom-boankazo dia ny riandrom-bary mitahiry rano izay mamafaza eo amin'ny habakabaka izay mifandray amin'izy ireo, mandrakotra azy ireo amin'ny ranomay. Mifanohitra amin'izany, ny toetran-dranomanga dia manondro ny orana izay mipetaka amin'ny ranomandry madinika.
Araka ny azonao an-tsaina, mitaky hafanana mangatsiaka be loatra mba hampiato ny ranomandry any anaty rivotra - eo ho eo -31 ° F (-35 ° C) na ambany indrindra mba ho marina! Noho izany antony izany, ny ankamaroan'ny ranomandry dia hita manodidina ny faritra Arktika sy Antarctique.
Mialoha ny hibanjina fahitana
Na dia mahavariana aza ny orana, tsy hoe tsy misy loza izany. Miankina amin'ny fifantohana ny rindrin-drano misy azy, ny zavona dia afaka mihetsika avy any amin'ny hazavana mankany am-piandrasana ary mety hisy fiantraikany lehibe amin'ny fahitana, ka mampihena azy io ho isa zero amin'ny toe-javatra sasany. Izany dia mety hitondra faharetana, fanesorana ary loza, satria ny rahona dia mahatonga ny sambo, fiaran-dalamby, fiara ary fiaramanidina mba hifankahazo.
Isaky ny misambo-drivotra, dia aleo foana ny hampidina ny hafainganam-pandehanao ary ampiasao ny lanjan-drivotra ambany. (Na dia mety halaim-panahy aza ianao hampiasa ny tandrok'ao ambony mba hifehezana ny zavona, dia ho hita taratra eo amin'ny masonao ihany ny hazavana ary hampihena ny fahafahanao hahita ny lalana.)
6 Zavatra Tokony ho Fantatrao Momba ny Evolisiona ara-Bioolojika
Manisa ny Planeta Habitable
Ny pH an'ny Rano
Famaritana Vector ao amin'ny Siansa
Ataovy lisitra 10 karazana soliden, rano ary gaza
Formula et Formula empirique
Ny momba ny Virus Ebola
Biôlôjika sy suffixes: arthr- na arthro-
Ahoana ary nahoana no hamaly ao amin'ny Code PHP anao
Ireo horonan-tsarimihetsika Classic izay nisy ny fiaramanidina
Ny fomba hanamboarana fiompiana ara-toekarena.
Ny Ady Lehibe Faharoa: Fahasarotan'ny F4U Corsair
Vehivavy mpanoratra fahiny
Ny zavatra azonao atao dia mety hiadiana amin'ny Alzheimer
Ireo mpilalao malaza 16 tamin'ny taonjato lasa
FIANERANA - Ny anarana sy ny loharano nipoirany
Fomba hiatrehana olana amin'ny olana
Britanika Fahafatesana sy Fandevenana an-tserasera
Inona no horonan-tsary tsara indrindra nataon'i Robert Downey Jr.?
Fandresena ny fanahiana miteny rehefa miteny frantsay
Fitsangatsanganana ho an'ireo mpitandro filaminana any Eorôpa
Manaova fanamarihana avy amin'ny sariitatra politika
Iza no mitantana ny fotoana fialan-tsasatra?